Ny HTC 10 dia manomboka mandray ny fanavaozana Nougat avy amin'ny OTA any Eropa | Androidsis
Andro vitsy lasa izay efa hitanay ny fijanonana teny an-dalana izay efa nataon'i Sony mihitsy fametrahana ny fanavaozana ny kinova 7.0 Android izay fantatra koa amin'ny hoe Nougat. Fijanonana eny an-dàlana tahaka ny nitranga tamin'ny Nexus 6P, izay niaritra fanemorana noho ny olana hita, rehefa ho azon'izy ireo ilay Android 7.0.
Amin'ny andro fanavaozana ny marika isan-karazany dia fotoana famoahana ny Android 7.0 Nougat ho an'ny HTC 10, fotoana fohy taorian'izay efa nambara ny fanombohany. Eto i HTC dia tsy tonga tamin'ny fanemorana ary amin'izao fotoana izao dia mety hahazo ny fanavaozana Nougat amin'ny alàlan'ny OTA ianao.
Graham Wheeler, talen'ny serivisy sy vokatra ho an'ny HTC EMEA, dia nibitsika fa ny 1,17 GB OTA dia natomboka tamin'ny singa tsy voavaha amin'ny HTC, na dia izao aza any UK ihany. Faritra hafa any Eropa no hahazo ny fanavaozana manomboka izao.
Tsy ny HTC 10 ihany no manana ny antoko Nougat, fa ny fomba fiaina HTC 10 Manomboka mahazo ny fanavaozana 1,15GB ihany koa izy raha ny filazan'ny mpampiasa Twitter @LlabTooFeR. Ary ny HTC One M9 dia hanana ny anjarany amin'ny Android Nougat miaraka amin'io OTA io, noho izany ny orinasa Taiwanese dia tsy mamela na iza na iza ao amin'ny tendron'ny tendrony avo indrindra raha tsy misy ny 7.0.
Toy ny mitranga matetika amin'ity karazana fanavaozana fanavaozana ity dia ho fotoana kely vao tonga izy io. 7.0 ho an'ireo mpandraharaha sy ny sisa amin'ny firenena. Azonao atao koa ny mamakivaky ireo forum HTCManía, na XDA Forums mba hikarohana rindrambaiko sasany mamela anao hametraka Nougat alohan'ny hidirany amin'ny OTA amin'ny telefaonao. Nougat izay manome an'io fiheverana kanto io amin'ny sary sy amin'ny fampisehoana, nefa tsy manadino fanatsarana lehibe eo amin'ny fiainana bateria.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Android Version » Android 7.0 Nougat dia manomboka aparitaka amin'ny HTC 10, 10 Fiainana ary One M9 any Eropa
Ny Nokia 'Heart' dia miseho amin'ny efijery 5,2-inch, fakan-tsary Snapdragon 430 ary 13 MP